जनप्रतिनिधिको राजिनामाबारे के छ प्रावधान ? | खुल्लापाना
जनप्रतिनिधिको राजिनामाबारे के छ प्रावधान ?
बिजय नेपाल २०७९ बैशाख ८, बिहिबार (१ महिना अघि) ५३ पटक पढिएको
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ यही बैशाख ३० गते हुंदैछ । सो निर्वाचनको लागि बैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ ।
उक्त निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने उम्मेदवारले आफू कुनै सरकारी सुविधा प्राप्त पदमा भएमा बैशाख १० गतेभित्र सो पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि बैशाख १० गतेभित्रै आफ्नो पदबाट राजिनामा दिइसक्नुपर्ने सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकाश रिजालले बताए ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखले आफू पुनः उम्मेद्वार बन्ने भए उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजिनामा पेश गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । पुनः उम्मेद्वार नबन्ने हो भने राजिनामा गर्नु नपर्ने रिजालले बताए । वडा अध्यक्ष सहित वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत प्रमुख वा प्रमुख नभएमा उपप्रमुख समक्ष राजिनामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य वा पदाधिकारीले पनि यो निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन चाहेमा प्रमुख समक्ष र प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष राजिनामा दिनुपर्नेछ । १० गतेभित्र राजिनामा पेश नगरी उम्मेद्वारी दर्ता गराएमा सो उम्मेद्वारी बदर हुने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला न्यायधिवक्ता एवम् मेलम्ची नगरपालिकाकी निर्वाचन अधिकृत निमा घिमिरेले बताइन् ।
उम्मेद्वार हुन चाहने जनप्रतिनिधिहरूले राजिनामा गर्दा आफूले राजिनामा पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिले पहिले नै राजिनामा गरिसकेको अवस्थामा भने कानुन मौन रहेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएको वा एक जना मात्र भएको अवस्थामा भने कार्यपालिकालाई सम्बोधन गरेर कार्यालयको दर्ता फाँटमा राजिनामा पत्र दर्ता गरिएको पत्रको प्रतिलिपि उम्मेद्वारी दर्ताको समयमा पेश गर्नुपर्ने सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला न्यायाधीश एवम् मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रप्रकाश तिवारीले बताए ।